Ozi anyị siri n’aka ndị MSNBC nwete n’akọwa na otu ụgbọelu bu ihe karịrị mmadụ 120 dara n’ihe mberede ụgbọelu na Pakistan. Ihe mberede a mere na Fraịdee, ka yabụ ụgbọelu na-akwado ifeda n’otu ọdụ ụgbọelu dị na Islamabad, isi obodo Pakistan.
A ka na-eme nnyocha maka ighọta ihe kpara ihe mberede a. Mana a na-akọwa na ajọ ọnọdụ ihu eluigwe, nke a hụtara mgbe ihe a mere, nwere ike iso n’ihe ndị kpatara ihe mberede a. Ihe karịrị mmadụ 120 nwụrụ.